Indlela yokucima iakhawunti ye-iCloud ngaphandle kwephasiwedi ifunyenwe | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | iCloud, Ukhuseleko lwePhone
Saqala ukuva nge-iCloud ngo-2011. Ukusukela ngoko minyaka le I-Apple ibisongeza imisebenzi emitsha ukuyenza ukuba ibe yinto ebaluleke kakhulu yabo bonke abasebenzisi beemveliso zeApple, nokuba ziiselfowuni okanye iikhompyuter. YayinguSteve Jobs owathi, kwiinyanga ngaphambi kokubhubha kwakhe, wazisa i-iCloud eyayiza kuhamba kunye ne-iOS 5 kwaye wasivumela ukuba sibe nolwazi olufanayo kuzo zonke izixhobo ze-Apple, ezinje ngabafowunelwa, ikhalenda, amaxwebhu elifu, iMeyile.
Ngamazwi kaSteve Jobs xa wazisa i-iCloud kwinkomfa yonjiniyela ka-2011:
Namhlanje yingxaki yokwenyani nephazamisayo ukugcina lonke ulwazi kunye nomxholo usesikhathini kuzo zonke izixhobo zakho. ICloud igcina ulwazi lwakho olubalulekileyo kunye nomxholo usesikhathini kuzo zonke izixhobo zakho. Konke oku kwenzeka ngokuzenzekelayo kwaye ngaphandle kweentambo, kwaye ekubeni idityaniswe kwizicelo zethu awunyanzelekanga ukuba ucinge ngayo, iyasebenza nje.
1 Yintoni iKhowudi yokuSebenza?
2 Ndilibele iphasiwedi yam ye-iCloud, ndingenza ntoni?
3 Ungakuphepha njani ukuthenga isixhobo esivaliweyo yi-iCloud?
4 Ungalicima kanjani iCloud kwi-iPhone, kwi-iPad, nakwi-iPod
5 Indlela ukuvula i iPhone itshixiwe yi iCloud kunye iOS 7
6 Indlela ukuvula i iPhone itshixiwe yi iCloud kunye iOS 8
7 Ungayivula njani i-iPhone etshixiwe yi-iCloud nge-iOS 9 / iOS 10 / iOS 11
8 Ngaba i-iCloud inokutshixwa ngaphandle nge-jailbreak?
Yintoni iKhowudi yokuSebenza?
Ngokufika kwe-iOS 7, iApple yandise ukusebenza kwe-iCloud ngokongeza ukhetho olusivumele ukuba sitshixe i-iPhone yethu xa ilahleko okanye ubusela. U-Apple wanyanzelwa ukuba phumeza lo msebenzi ukuphucula ukhuseleko lomsebenzisi, kodwa nokuzama ukunciphisa ukubiwa kwesi sixhobo, ebesinyukile kwiminyaka yakutshanje ngenxa yexabiso elinamaxabiso ebebenalo kwaye eliye lenza ukuba libe sesinye sezixhobo ezinqwenelekayo kwintengiso emnyama.
Enkosi ngokutshixa kokuvula okufakwe kwi-iOS 7, ukuba isixhobo sibiwe okanye siyalahleka, sinokuthintela ukufikelela kwisiphelo sendlela ukongeza ekufumaneni ngalo lonke ixesha apho ikhoyo, ilungele xa siphulukene nayo okanye sayilibala. Ukusuka kwiwebhusayithi ye-iCloud singasifumana ngokukhawuleza esi sixhobo, sibonise umyalezo kwiscreen ukuze ukuba umSamariya olungileyo usifumene, usibuyisele kuthi, usivimbe, usenze sikhuphe isandi okanye ucime konke okukuso kude. Xa isixhobo sitshixiwe, akunakwenzeka ukuba siyisebenzise ukuba asinalo igama eligqithisiweyo leakhawunti ye-iCloud apho i-terminal inxulunyaniswa khona, ngale ndlela iba i-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch ngumsebenzi ongenamsebenzi njengoko uguqula i-terminal ibe yiphepha elinobunzima.
Ukuba yi-iOS 7 ingxelo yokuqala apho lo msebenzi wawufumaneka khona, Ukutshixa ukusebenza bekunegciwane evumele ukuba kungasebenzi umsebenzi ufumane i-iPhone yam, ukuze nawuphi na umsebenzisi ofumene okanye ofumene i-iPhone ene-iOS 7.1 angavula i-terminal ngaphandle kokufaka igama eligqithisiweyo leakhawunti ye-iCloud eyayinxulumene nayo. Abafana abavela eCupertino bathathe ixesha elincinci kakhulu ukusombulula le mpazamo ibalulekileyo yokhuseleko kwaye okwangoku ekuphela kwendlela yokuvula i-iPhone etshixiwe yi-iCloud ayikho, ubuncinci kwithiyori, kuba ukuba sikhangela kwi-intanethi singafumana iindlela ezithi ziyakwazi yenza njalo, iindlela endizichaza apha ngezantsi.
Ndilibele iphasiwedi yam ye-iCloud, ndingenza ntoni?
Ukulibala igama eligqithisiweyo leakhawunti yethu ye-iCloud apho sinazo zonke iiterminal zethu ezinxulumene nayo ayisiyiyo eyona nto imbi ingenakwenzeka, kuba UApple usinika ezinye iindlela ezifanelekileyo zokufumana kwakhona. Ukuba asilikhumbuli igama eligqithisiweyo leakhawunti yethu, into enokubulela ngesiqhelo ekusetyenzisweni kweTouch ID ethintela iimeko ezininzi ekungeneni igama eligqithisiweyo, kufuneka sithathe uhambo oluya kwiwebhusayithi https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid, iphepha elenziwa yiApple kubo bonke abasebenzisi balo ukuba batshintshe ipassword yeakhawunti yabo iCloud.
Ingxaki iza xa singazikhumbuli iimpendulo zemibuzo ephambili esayibuza xa sasayina iApple. Gcina ukhumbula ukuba I-Apple kufuneka iqinisekise i-100% ukuba singumsebenzisi osemthethweni Yale akhawunti ke kuyacetyiswa ukuba kongezwe imibuzo esinokuyikhumbula kwaye ingekho kufikelela kulwazi lwabasaziyo.
Kwezi meko sinyanzelekile ukubhenela kwenye yeendlela ezizezinye esinokuyifumana kwi-intanethi ukuba asifuni i-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch yethu ukuba ibe liphepha elinobunzima, kuba iApple ayisiniki sisombululo malunga noku, kuba ayongxaki yethu ukuba asizikhumbuli iimpendulo kwisitshixo imibuzo esiyisekele ngexesha lokukhutshwa.
Ungakuphepha njani ukuthenga isixhobo esivaliweyo yi-iCloud?
Xa uthenga isixhobo esenziwe ngesandla, kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezahlukeneyo ezinokusinceda sazi ukuba isixhobo sibiwe okanye cha. Okokuqala, kufuneka ufumanise Ukuba ukuthengiswa kwesixhobo kubandakanya ibhokisi kunye netshaja, kuba ii-headphone zezizathu zococeko azihlali zinxulunyaniswa nentengiselwano. Nasiphi na isiphelo esithengiswayo ukuba ibhokisi kunye netshaja (zininzi iintengiso ezinjalo) kufuneka zingathembeki kwaphela.
Okwesibini, ukuba i-terminal ithengisiwe kunye nebhokisi yoqobo kunye neshaja (ebalulekileyo) kufuneka fumana inombolo ye-IMEI okanye inombolo yesiriyeli yesixhobo kwaye uyazise kwi- Iphepha le-Apple esivumela ukuba sijonge imeko yokutshixa kokuvula. Eli phepha liza kuthi lisazise ukuba i-terminal inxulunyaniswa neakhawunti okanye ukuba, ngokuchaseneyo, sele ikhutshiwe kule bhloko kwaye inokusetyenziswa nangubani na onenye i-ID yakho ye-Apple.
Ungalicima kanjani iCloud kwi-iPhone, kwi-iPad, nakwi-iPod
Ukusukela ukufika kwe-iOS 7 ngalo lonke ixesha singena kwi-ID yethu ye-Apple kwisiphelo sendlela Umsebenzi we-My iPhone usebenza ngokuzenzekelayo, umsebenzi osivumela ukuba sibambe isixhobo kude. Ukongeza, i-terminal ihlala inxulumene ne-ID yethu, ukuze siyilahle okanye ibiwe, kuphela siya kuba nakho ukuyivula kwaye siqhubeke nokuyisebenzisa. Yiyo loo nto, kungaze kucetyiswe ukuba ungasebenzi lo msebenzi. Ukuvula i-iPhone yam kufuneka silandele la manyathelo alandelayo:
Siye phezulu Useto.
Ngaphakathi Useto siya kulo iCloud.
Ngaphakathi iCloud sifumana ukhetho Fumana i-iPhone / i-iPad / iPod yam touch kuxhomekeke kwisiphelo esisisebenzisayo.
Kwiwindow elandelayo Sityibilika iswitshi ukuyicima. Ngelo xesha kuya kufuneka singenise ipassword yethu ukuqinisekisa ukuba singabasebenzisi abasemthethweni besiphelo sendlela.
Indlela ukuvula i iPhone itshixiwe yi iCloud kunye iOS 7
I-iOS 7 yayikukufika kokuFumana umsebenzi wam we-iPhone kunye nayo kunye nokusebenza kokutshixa, isitshixo esikuvumela ukuba uvule lo msebenzi ngaphandle kokufaka iphasiwedi. Le bug kuphela iyafumaneka kwi-iOS 7.1 nakwiinguqulelo zangaphambili icamngca kwi-iOS 7, kuba i-Apple yayivala ngokukhawuleza le mpazamo, iyeka ukuhambelana nayo nayiphi na inguqulelo ye-iOS 7.1.x. Kwividiyo engezantsi ungabona ukuba isebenza njani le ntsholongwane.
Njengoko ubona kwividiyo, kulandela amanyathelo amaninzi Ungayicima iakhawunti ye-iCloud kwaye ngenxa yoko wenze umsebenzi we-'Fumana i-iPhone yam ', kwaye konke oku ngaphandle kwesidingo sokufaka igama lokugqitha.
Ewe kunjalo, ukuze ungoyiki Kuya kufuneka uyazi ukuba ukuba ufaka ikhowudi yokutshixa kwisiphelo sakho kuya kuba nzima ukwenza lo msebenzi usebenze.
Isebenza njani le bug:
Siya kuqwalaselo lwe-iCloud, esiya kuyifumana ngaphakathi kwesicelo seSetingi.
Sizama ukucima iakhawunti ye-iCloud kwaye xa isicela ngegama eligqithisiweyo siya kuyicima iDevice yethu.
Siphinde sayilayita kwakhona.
Sivula i-terminal (kubalulekile ukuba ayinalo igama eligqithisiweyo).
Siya kwimenyu yezicwangciso, kwaye emva koko siza kungena kuseto lwe-iCloud.
Siza nqakraza ukucima iakhawunti iCloud.
Siza kukuqinisekisa ukususwa kweseto se-iCloud.
Nje ukuba la manyathelo enziwe, uya kuba nakho ukubuyisela isixhobo ngaphandle kwesithintelo. Into eyingozi kakhulu kodwa esiyikhumbulayo isebenza kuphela xa isixhobo sakho singenayo iphasiwedi yokutshixa.
Indlela ukuvula i iPhone itshixiwe yi iCloud kunye iOS 8
Buyela kwi-iOS 8, ingcali yezokhuseleko ifumene i-bug enkulu yokhuseleko kwi-imeyile yemveli ye-imeyile, ekuvumela ukuba ususe iphasiwedi yakho ye-iCloud. Le bug yayifumaneka kwi-iOS 8.3 kwaye yayihambelana nazo zonke izixhobo zisebenzisa olo hlobo lwe-iOS. Ngokwale ngcali, isicelo seMeyile sinesiphene esivumela ukuba sifake ikhowudi ye-HTML ekhutshiweyo kude kwi-imeyile, esongeza ikhowudi ngohlobo lwethegi Yeyiphi ngqo clone iCloud yokungena, efanayo ebonakalayo xa iApple ifuna ukuba sizazise njengabasebenzisi abasebenzayo besixhobo.
Le khowudi inokucwangciswa ukuze isebenza xa uvula i-imeyile ngokuthe ngqo ukunqanda ukurhanelwa. Le bug ayiphakamisi ukukrokra kuba i-iOS inesiqhelo kwaye ngamanye amaxesha ngaphandle kwesizathu esibonakalayo sokucela iphasiwedi yethu ye-iCloud, ke abasebenzisi akufuneki bacinge ukuba ayihambelani nesicelo sokwenyani esivela kwinkqubo. Olona hlobo kuphela lokujonga ukuba ngaba sisicelo esizama ukuba iphasiwedi okanye siyinyani kukucofa iqhosha lasekhaya. Ukuba isicelo siyinyani, i-iOS ayisayi kusivumela ukuba sishiye iscreen esifuna iphasiwedi.
Kule vidiyo ungabona ukuba isebenza njani le bug ekuvumela ukuba ubambe ipassword yezixhobo apho i-iOS 8.3 isebenza khona.
Ungayivula njani i-iPhone etshixiwe yi-iCloud nge-iOS 9 / iOS 10 / iOS 11
Inye kuphela indlela yokuvula isixhobo kukwazi igama eligqithisiweyo leakhawunti apho i-terminal inxulumene nayo. Kukho ezinye iindlela esivumela ukuba sivule i-terminal sisebenzisa usetyenziso. Ngokukodwa, sithetha ngesicelo seDoulCi, isicelo sasimahla esifumaneka kuzo zombini iMac kunye neWindows. Inkqubo ye- Le software isebenza ngokwenza i-dummy server efanayo ne-Apple's Ekukhohliseni ngokupheleleyo isixhobo kwaye iya kusinika isitshixo ekuya kufuneka singene kwi-iCloud yokungena, eya kubangela ukuba wonke umxholo ucinywe kwaye kuya kufuneka songeze i-ID entsha.
Ngaba i-iCloud inokutshixwa ngaphandle nge-jailbreak?
Nangona uninzi lwabasebenzisi abasebenzisa i-jailbreak ukufaka usetyenziso lwe-pirated kwii-terminals zabo, into evela ku-Actualidad iPhone esingayixhasiyo, ukuqhekeka kwejele akusebenzi nje loo nto, kodwa eyona nto iphambili kubasebenzisi abaninzi kukukwenza izixhobo zabo ngokongeza imisebenzi iApple ayibandakanyi. Ngokuqhekeka kwejele akukho sixhobo esivumela ukuba sisuse isitshixo se-iCloud okanye uvulele i-terminal ukuba inxulumene nomsebenzisi othile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iCloud » Bafumanisa indlela yokucima iakhawunti ye-iCloud ngaphandle kwephasiwedi
Izimvo ezi-95, shiya ezakho
Kungenxa ye-iphone 4 ene-iOS 7.1 kuphela
I-berdad mio isebenza kuphela nge-iphone ios 7.1.2
U-perez omncinci sitsho
Indoda iluncedo ekuvuleni iakhawunti yelifu?
Phendula kuJunior Perez
Yeka, unjani, unomdla?
khange isebenze kum
Molo, nantsi ndinishiya nenkqubo ukuba isebenza nyani nge-iphone 5 16gb, ndishiya ikhonkco le-mega ukuze uyikhuphele, uyivule iziphu kwaye yiyo kwaye iya kuvela kuzo zonke iimodeli
Ukuba ufumana impazamo, zama ukukhubaza i-antivirus, isebenzele mna okokuqala, enkosi
Ukukhubaza i-antivirus ?? oko kuvakala ngathi yile ntsholongwane xD
Phendula ku jesus1207
Molo, ucinga ukuba ikhonkco alisafumaneki, ucinga ukuba ungathumela uxinizelelo kum imeyile nceda?
UJose "u-Azabel the Ripper" weSilivere sitsho
ukukhukhumala kungakhubekisi i-antivirus kwaye ayisebenzi kwaye ayiniki mvume
Phendula kuJoseph "Azabel the Ripper" Isilivere
Ngaba uyenzile ngenene ifayile ngoluhlobo injalo kwaye ukhubaze ukukhusela kwakho ekuphela kwento umntu ongamaziyo akunike yona ongakwaziyo ukubhala kakuhle? Umhlaba mubi, awazi ukuba inokuba yindawo engaphandle (inkqubo yokufumana ukufikelela okupheleleyo kwiPC yakho ngaphandle kokuqaphela) kwaye inokuba zonke iinkcukacha zakho ezibuthathaka kwaye ibone nekhamera yakho yewebhu? Kwaye ukuba ngentla apha uthi akukho nto iqala kuba ngesizathu esingakumbi sokukrokrela, olu hlobo lwe-malware lusebenza ngasemva "olungabonakaliyo" kumsebenzisi, nokuba ngubani na olwenzileyo ndicebisa ukuba ucoce iPC yakho kodwa ngoku, ungasebenzisa iskena se-antivirus seComodo. , Hitman's okanye uGqirha Web's.
Azabel isiRipper sitsho
Kuya kufuneka uvelane noMargaret ukuba alayishe okanye anike ikhonkco kwifayile engasebenziyo, ubuncinci kukho abantu abangenazintloni abayibeka kwifayile kwaye iya kuba lilungu lezinto ezincinci kwaye ihlawulwe ... x bacela into kodwa imini yakho ilahlekile lixesha .. ulusizi
Phendula kuAzabel Ripper
Ukuzama indlela ebonakala kwi-youtube kunye ne-ios 7.1.1 Ndizamile iintsuku ezimbalwa. Iakhawunti ayicinywanga, kodwa ngenye imini i-r sim 9 pro yam yandinika impazamo kwaye ndayiqalisa kwakhona iphone yam. Xa ndivula ifowuni, bendingenayo iakhawunti yakudala, ndiye ndayibhala phantsi icloud akhawunti yam ndangena. Kwaye voalà!, Bendingasenayo enye i-akhawunti ye-icloud, ke ndinokuyibuyisela ngaphandle kokulwa 😀 ndahamba ndayokukhangela icloud yam kwaye ndizokwazi ukubona eyam ifowuni.
Ndikhangela, ndiyifumene le nkqubo kwaye yandisebenzela kwi-iphone 5c ... kwaye apha ndiza kubona ukuba iyakusebenzela
Ndine-iPhone 5s kwi-mobile endiyithengileyo kodwa ine-akhawunti ye-icloud andikhange ndiyifake iphasiwedi, inguqulelo ngu-7.1.2 Ndifuna ukwazi ukuba ikhona indlela yokususa loo akhawunti kwaye ndizame ukundiphuza ndibukele iividiyo ezenza iziphumo kodwa andiphumelelanga cima iakhawunti ngoku umnxeba awunako ukwenza umnxeba unditsalele umnxeba ... akukho nkonzo ayithathi nayiphi na into ecacileyo yemoto ndiyazi ukuba ndenze ntoni ngaphezulu
Sikunye nephone 4 = (
Ndine5c kwaye andifumani ndawo yokuvula icloud, uyazi ukuba yeyiphi inkqubo yokukhuphela?
Inkqubo ndiyayidinga, ndilibale i-imeyile
ayikho indlela yemizuzu yokuvula icloud ke !! Khumbula iphasiwedi jejejejjejejej okanye ungayifumana kwi-appel etshintsha iphasiwedi ukuba kunjalo !! kodwa ukuba uyibile, basikelelekile.
Ingelosi uJoaquin Aranda Terrero sitsho
Ndine-Ipad 5 yam evaliweyo kuba iakhawunti ye-Icloud isegameni lomnye umntu, ukuba umntu angandinceda aqhakamshelane nam kwidilesi ye-imeyile angelaranda@correodecuba.cu. yiba nesisa kumntu ondincedayo.
Phendula u-Angel Joaquin Aranda Terrero
Kufuneka ubuyisele iPhone, uqwalaselo, jikelele kunye ngocwangcisa. Cacisa useto kunye nomxholo.
Emva kwexesha uqala kwakhona kwaye ungangena ngenye iakhawunti.
Okanye uye kwiIcloud.com kwaye ucele ukufumana iphasiwedi. Apha.
Ukuba akukho namnye kubo osebenzayo, ungayisa kumhambisi we-ipod kwilizwe lakho, apho banokufumana khona iakhawunti yakho, benolwazi lokuba ulwazi olo luxhaswe.
Khumbula ukwenza i-backup ngaphambi kokuba uyibuyisele.
kwividiyo ibonwa ngokucacileyo ukuba kungokucinezela ngaxeshanye «fumana ifowuni yam» kwaye «ususe iakhawunti» ethi kumanyathelo okuvula iphone ayilunganga.
kelvin soto sitsho
Ndinendlela ekhuselekileyo yokususa icloud yakho kwisixhobo sakho se-iPhone ... (ukusuka kwi-4 kuye kwi-6 +)% 100 esebenzayo ... inkqubo ithatha iintsuku ezi-4 ukuya kwezi-5 ukuyisusa. Uyenzile nge-Imei yesixhobo sakho. Ngolwazi oluthe kratya ndithumele i-imeyile ku fbwirelesstech2@gmail.com
Phendula kelvin soto
Uhambisa uHerrera Rodulfo sitsho
Mholo. Ndingakunceda ususe icloud kwimizuzu engama-30. Ewe kunjalo ine-PROS kunye ne-CONS yayo. ndibhalele http://www.facebook.com/thedevilinpersondie
Phendula kuMoise Herrera Rodulfo
isebenza kwi-ios 9.3.4
Phendula u-carlos gomez
Namhlanje vula i-iPhone 6S
Ngubani ofuna ukuvula?
Phendula ku YakusaWolf
Mholo!! Nceda iApple yam yokuBukela ayiqhagamsheleki kuba iakhawunti ebendinayo ngaphambili nge-iPhone 6 ndiyilibele kwaye ndathengisa iCel kodwa kule iPhone andikwazi ukuyidibanisa kuba indibuza i-iCloud yangaphambili yenye iCel yam kodwa andiyikhumbuli , le Cel yam intsha kwaye ndenze iCloud entsha, ndenza ntoni?
alex Alfredo sitsho
Phendula ku-alex alfredo
Molo ulungile, ndine-iPhone 4S eneakhawunti ye-icloud onokundinceda ndiyicime ndiyisebenzise njenge-iPod, enkosi, ukuba kukho umntu onokundinceda, nantsi imei 013047000926184, enkosi kakhulu
IMerruk Technologi sitsho
Apha bayayisusa nge-imei
Phendula Merruk Technolog
Itekhnoloji ye-merruk, ikhonkco lakho linyulu.
Molo molo, ndithintele i-icloud ye-iPhone 4s, ngubani owaziyo ukuyisusa ukuze uyiguqule?
Ndithenge isandla sesibini
I-iphone 5 kodwa iyandibuza icloud lomntu kuba usebenze ukukhangela iphone yam le inesisombululo
Molo apho !!!
Ndine-iPhone 6 etshixiweyo, ngaba ukhona umntu owaziyo ngayo nayiphi na isoftware yokuvula i-ICloud okanye i-Imei?
Ndine-iCloud itshixiwe i-iPad 2. Umntu othile uyayazi ukuba angayisusa njani.
Udinga idatha ye-iCloud (igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha)
Luís, ndiyazi, ingxaki kukuba yeyesibini ... kwaye andinayo idatha.
Kuya kufuneka unxibelelane nomniniyo emva koko, andazi nayiphi na enye indlela.
Ndine-pad 2 kwaye andisayikhumbuli igama eligqithisiweyo le-¡cloud, ndingayivula njani i-plsss. Iintsikelelo
Ndine-ipad 3 kwaye andisayikhumbuli iphasiwedi, ndingayivula njani okanye ndiyicime?
Kuyabonakala ukuba sonke sinengxaki efanayo ne-ICloud, akubangakho mntu unokucima iakhawunti ngaphandle kwephasiwedi, ke nabani na owaziyo ukuba angayenza njani yabelane nabo sidinga nathi. ENKOSI!
UFrancisco Soliz sitsho
ICatalina Ndine-iPhone 6
Ibandakanya ntoni inkonzo yakho ???
Phendula i-soliz francisco
Wonke umntu uyaqonda ukuba nge-iPhone awudlali kwaye ungcono ukonwabele ukungazifumani izinto ezinemvelaphi engathandabuzekiyo hahahahahahahaha
UFrancisco M. sitsho
Ayisiyo yokuba banemvelaphi engathandabuzekiyo kodwa yile bhlog yokucela uncedo
Phendula uFrancisco M
hahaha, yeka intloni endicinga ukuba kuphela ine-iPhone 5 etshixiwe, kodwa ndiyabona ukuba andindedwa ndicela ukuba umntu asazi isisombululo sokwabelana ngaso.
Ndine-5s ye-iPhone abandithengisela yona kwaye ine-akhawunti ye-icloud, kwaye ndifuna ukwazi ukuba uyisusa njani nale ndoda emva kokuyibona kodwa asive nto ngaye.
Ungathini ngam, ndilibele iphasiwedi ye-aiclon kwaye ndingayicima njani ukuze ndibeke enye
Ndithenge i-iphone yasesandleni yesibini 5 ios 7.1.1 kwaye ndineakhawunti ye-icloud. Ukukhangela kuYouTube ndifumene ividiyo kwaye ndakwazi ukususa iakhawunti yangaphambili ndabeka eyam. Andiqinisekanga ukuba ukuhlaziywa kuyo kuya kubuza i-akhawunti yomnini wangaphambili
sebastian rodriguez bogota sitsho
Hee ithini ividiyo? : c
Phendula u-sebastian rodriguez bogota
UJavier mx sitsho
Molo, ndathenga i-iPad encinci ye-3 yesizukulwana sesi-3 kumzamo wokuba kutheni ndifuna enye umboniso kodwa apho bandishiye enye ngo-1500 kunye no-2500 x XNUMX. Kundincede kakuhle ukuzichitha ngokupheleleyo kwaye ndithengise nganye yazo, iibhetri, ukubamba, ukubonisa, amaqhosha, iimpondo, izindlu, indawo ekwi-Intanethi ndaze ndathenga entsha kwezi zintathu, ndinikezela ngamaqhekeza, ndichitha kuphela kwizikrufu kunye tutorials ngendlela yokuqhekeza kunye ne-voila, imibuliso,
Phendula kuJavier mx
UJorge Reyes sitsho
hahahahahahahaha, yeyiphi ividiyo ebubudenge, jonga ividiyo ukuba okwangoku ushiya iphone kwikhibhodi ye-pc, ukurekhodwa kuyatshintsha, ke ividiyo iyanqunyulwa
Phendula Jorge Reyes
Ndine-5s esele ibuyisiwe kwaye kufuneka ndisuse icloud. Bathengisa i-iPhone kum kwaye andinokwazi ukunxibelelana nomntwana ukuze andinike i-apple id ukuze ndifumane icloud. Ngaba ukhona umntu onenkqubo yokususa icloud? ndiyacela.
ijean piero sitsho
Wonke umntu one-iPhone eneakhawunti, qhagamshelana nam kwezinye ii-iPhones ungazifumana njengabanye, andisebenzi kwi-bio bio ndithenge i-iPhone kwaye ukuba i-iPhone inemenyu kwaye ii-imeyile zivuliwe, ndingafumana iakhawunti, ndiza kushiya inombolo yam unditsalele i-990444745 yonke eChile
Phendula u jean piero
Ungathini xa ndinayo i-iPhone 4s indiphawula ukusuka kwi-icloud icime yonke into kodwa ndinayo kodwa ke ndiyizisa ngomgca kwaye yonke into ayinayo ingxelo okanye nantoni na enokwenziwa apho… ..
Molo ekuseni lungiselela i-iphone 4s nge-id yeapile egqitywe ku-hotmsil.com Oko kukuthi ndenze impazamo xa ndibhala i-hotmail.com nditshintshe i-s. Xa ndisenza uhlaziyo lwesoftware, yandicela i-id ukuba ndiyibuyisele, kodwa kuba andilikhumbuli igama eligqithisiweyo lale id, yayivaliwe ngenxa yezizathu zokhuseleko. Xa uzama ukuvula le ID, ithumela ikhowudi yokhuseleko kwi-imeyile engekhoyo kwaye khange ndikwazi ukuvula iphone yam. Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho.
Molweni nonke, ndathenga i-iPhone 5s yesibini kodwa iakhawunti ye-iCloud yomnini wangaphambili ishiyekile, umntu uyazi ukuba kukho isisombululo ndicela uncedo. Nantoni na enokunxibelelana nayo kwi-imeyile yam s.jmg@hotmail.com okanye ndibhalele ku-whatsapp + 573195107267
Njengolu, i-iPhone yam ivinjiwe yi-icloud kwaye akukho nto konke konke ndikwazile ukuyivula, ungandinceda
Kuya kufuneka uyile loo imeyile ingekhoyo, okanye kwenye imeko ukuba ikho kufanele ukuba uyigqumelele loo imeyile kwaye ubone ikhowudi.
Ndinengxaki, ndine-iPhone 5 c kunye ne-icloud kwaye ndibeka i-imeyile kunye ne-password kwaye ayizukundivumela ndikhuphele nantoni na kwaye ingandithumeli nomyalezo wekhowudi ukuze ndikhuphele usetyenziso ukuze ndibone ukuba unganceda mna
Mholo !! Umntu oza kusidlulisela ulwazi ukuba banokuvula i-iphone yabo kwi-icloud ukuze babelane ngayo: (okanye into abayenzileyo ekugqibeleni nabo ndibona iimpapasho ezindala kakhulu.
Uxolo, ikhonkco olipasileyo lithi oku:
* Isitshixo se-iCloud kufuneka sibe nenombolo yefowuni, njengoko kubonisiwe emfanekisweni.
Kodwa kwi-iPhone 4 yam inombolo yefowuni ayiveli, ibonakala njengomfanekiso wokuqala, ingaba isebenza ngokufanayo ukuze ikwazi ukususa iakhawunti ye-icloud?
Molo, ndifuna umntu ozimiseleyo kwaye owaziyo ukuwenza kakuhle umsebenzi.Ndinemisebenzi ekufuneka ndiyenzile .. ndiyishiya i-imeyile yam guillermofarias38@gmail.com UWhatsapp 351-6180194
Mthandi akukho ndlela aziwayo, uyeke ukukhwabanisa abantu, nceda unganiki iinkcukacha zakho zomvuzo, iphepha liyi-trout !!!!
UJohcsan Torres sitsho
Ndine-iPhone 5 kwaye ndifuna ukuyisebenzisa, kuphela icloud endithintelayo :(
Nceda +52 044 656 312 8789
Phendula kuJohcsan Torres
Kum, abo bacela olu lwazi kungenxa yokuba bathenga izixhobo ezibiweyo kwaye yiyo loo nto bakuloo meko. Thenga izixhobo ezisemthethweni kwaye zingabiwa !!!
UAlfonso Zarate sitsho
hahaha, indinika ukuhleka kancinci oko ikuthethayo ekugqibeleni ukuba akukho ndlela yokuphelisa ilifu, ewe ikhona, kodwa ngokucacileyo ayizukubeka ukuba yenziwa njani, akunjalo? Ndineekhompyuter ezingaphezulu kwama-20 phakathi kwe-iPhones kunye ne-ipads kwaye ndinokuxelela ukuba, ukuba unakho, kuphela baninzi abangaziyo ukuba bangayenza njani, ukuba kuyabiza, ndiyakuqonda oko, yiyo loo nto kucetyiswa izixhobo Isalathiso sexabiso eliphezulu kwimarike Ewe, ukukhutshwa kwe-icloud kuya kukuxabisa malunga neepesos ezingama-2500 XNUMX zaseMexico.
Phendula u-Alfonso Zarate
Alfonzo unalo naliphi na iphepha ondicebisa ukuba ndilibhatale ukuze ndivule iphone yam eqinisekileyo ukuba abayi kundikhwabanisa
UDavid cruz sitsho
Zeziphi izicelo endizifunayo ukuvula i-iPhone 8plus? Nceda
Phendula udavid cruz
UGERARDO UGARCIA PAEZ sitsho
UKUPHELISWA KWE-ICLOUD KUNOKUBA NGENDLELA EQHELEKILEYO YOKUQHAWULA KAKHULU KODWA UKUSEBENZA, UNOKUQHUBA KUNYE NONXIBELELWANO OLUFANELEKILEYO EFONINI ... OKANYE KWI-APPLE MX HAHAHA WENZA, UKUBA UNokwazi OMNYE OFUMANA ISIKHUMBUZO SESIQINISEKISO SOKUQALA NOKUFONELELA I-APLE NGOKUQHELEKILEYO UKUXELELA INGXELO ABAYIFUNA NGEZIXHOBO ZABO, NGOKUBA NEDATA LOMNINI WOKUQALA, IMIBUZO YOKHUSELEKO YEZIXHOBO ZIYAPHENDULWA KUNYE KUNYE, ITHETHO LESIBILI. NGOKUTHENGWA KWE-INVOISI YESICELO NESICELO NGE-MAIL INKXASO KANYE KANYE KUNYE NOKUQHUBA OKUQHELEKILEYO. GERAGP2011@HOTMAIL.COM
Phendula GERARDO GARCIA PAEZ
Ndine iphone 6s, ndingayisusa njani iakhawunti ye-icloud?
Phendula ku kikeyeny@gmail.com
Heck. ifowuni yam yayiyeyomamazala kwaye wenza i-id entsha yefowuni yakhe entsha kwaye eyam ayizikhumbuli iipassword okanye nantoni na ... ndingenza njani ukuze ndibeke iakhawunti yam icloud?
Ndisenayo iphone 6s ene icloud bandixelela ukuba ungatsiba nge r sim yinyani
Molo ekuseni zihlobo apha ekulungisweni kwezibuko sivula izixhobo zakho ze-icloud ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwengxaki ngqo kwindawo yasekhaya okanye kwi-Intanethi, ukongeza, IZICWANGCISO ZOBUGCISA EZIQINISEKISIWEYO Izixhobo ezizodwa nezenzelwe wena zokuvula, ukukhupha kunye nokulungisa izixhobo onokuthi uqhakamshelane nathi ku-whatsapp +52 2292225800
Ukuba uvela eVeracruz, thetha neFrancisco Canal 962 phakathi kweHidalgo ne-Independencia Colonia Centro
Uyivula njani i-iPhone 5 ye-iOS 11 isandla sesibini kwaye umniniyo akazi ukuba ngubani ongayivula ukuba ayisebenzise. Bacela i-imeyile ku j*****@www.l*****.cl kwaye andazi ukuba yiyiphi i-imeyile okanye ngubani onceda !!!!
Phendula ku taeyang
Ungandinceda ukuvula i-ihpone 5 ine-icloud
NDINENDLELA YOKUSUSA I-ICLOUD, PHAKATHI KWAMA-30 NAMA-40 EEDLALA AXHOMEKEKE KWIMODEL
SIKwasusa i-EFI KWI-MAC
Ndine Iphone 6s Plus kwaye ivaliwe yi-icloud, ndicela undincede, ubhalele osniel86@nauta.cuImibuliso evela eCuba
Molo busuku obuhle, ndiyakwazisa ukuba ndiyavula i-iCloud iPhone 6 okanye 6s kwaye ndihlala eArgentina thumela iinombolo zakho, abo banomdla, le modeli yexabiso eliphantsi kuba ndinazo zonke izixhobo ukuba ufuna ukuvula enye imodeli ye-iPhone, ndingakulungiselela izixhobo eziyimfuneko kwaye uyivule.
Molo ndifuna ukuvula i-iPhone s6 yentsusa kunye nceda uncede, ndiyithengile kwaye xa ndiyibuyisela kumzi-mveliso, i-iCloud yomntu odlulileyo ivela, kwaye nge-Messenger kunye ne-wasap bendincokola kodwa xa ndiqhuba kakuhle Ndiyicimile kwaye bendingasakwazi ukunxibelelana naye.
Ukuvula i-iPhone 6s kunye. Unokwenza njani?
Molo, mva kwemini, ndine-6gb iphone 128s, ine-icloud isebenze. Ndicela bonke abafundisayo ukuba benze njani. Ndiyifumene @ gmail. Com
Umncinci_usher @ hotmail. Ukuza
molo ndine-iphone 6s evaliwe nge-icloud ngubani onokundinceda inombolo yam 0039 328 0722160 imeyile: gato.cuba73@gmail.com
Molo, ndine-iPhone 6s evaliweyo ngeakhawunti ye-icloud, ndiyithatha nge-ituns, kodwa ayizukundivumela ukuba ndiyihlaziye, ndincede ndivule i-xfa 9982319697
Molo mhlobo, kuyavela ukuba ndifumana i-6s evenkileni ngelixa bendithenga, ngaphezulu kwenyanga ephelileyo kwaye umniniyo akafowunanga, ndingathanda ukwazi ukuba ikhona na indlela yokunxibelelana naye,
molo olungileyo ndine-iphone 7 kunye no-6 wokuvula icloud ukuba senza njani ... ngubani ondincedayo
imeyile yam: rafaelduben_cruiser@live.com
Ndifuna ukwazi ukuba ndingayisusa njani iakhawunti ye-icloud kwi-iphone 6s. Enkosi
u-victor hugo sitsho
molo ongaziwayo; Ndine-iphone 6 (16gs) etshixe icloud ndiyibuyisele kwi-ios1.4.1 kwaye akukho ndlela yokuyivula ndingathanda ukwazi ukuba ufuna ukubona ntoni ukuba ungayivula na ...
yithi molo atte victorio2006@gmail.com Le imeyile yam yobuqu ..
Ndisuka e-Bariloche ………
Phendula u-victor hugo
UAlfredo MOran Lem sitsho
Ndidinga uncedo, ukuvula iphone
Phendula kuAlfredo MOran Lem
ULeonardo Bautista sitsho
Molo Mhlobo Ndidinga Uncedo Lwakho Nditshintsha Ifowuni Yam Ndibe Ne-iphone 6s Ngelixesha Lokuyitshintsha UngaJongi Ukuba Ndide Ndide Ndifike Endlwini Yam Kwaye Ifowuni Yayi-Factory Yasetwa Ngokutsha Ndibuze I-Akhawunti Ye-Icloud Endingayaziyo Ukuba Wena Ndicebise ukuba sele ndiphulukene nefowuni yam okanye sikhona isisombululo
Phendula kuLeonardo Bautista
Kwiselfowuni yokulungisa bandincedile ngokukhupha kunye nokuvula i-iPhone 7 ebendinayo kuluhlu olumnyama kwaye ndine-icloud kodwa ndiyise apho bayivula bayikhulula ndashiya inombolo yabo ye-whatsapp 2292225800, ndicebisa ukuba ujonge apho okanye naphi na emntwini ndiyabacebisa kuba yindawo ebonakalayo, ndizamile kumaphepha amaninzi e-fb kwaye bandingcungcuthekisa ngaphezu kwesinye, ukubulisa
Inkunkuma echanekileyo, thatha amanyathelo okulandela sele ukhona ngaphakathi kwenkqubo. Njenge $% / &% Siza kuyenza loo nto ukuba yile nto singenako ukuyenza.
Umakhulu wam undithumelele iphone, iyi xr kodwa uyilibele yonke into, akayikhumbuli i-imeyile okanye ipassword, ndingayivula njani, zama ngazo zonke iindlela kwaye akhonto inceda nceda
I-WhatsApp ikhupha isifuba sabasebenzisi bayo bemihla ngemihla